युवतीको मोबाइलमा ३७ पटक मिसकल, ए’सिड हान्नु अगी मोटर साइकलमा छो’डिदिएका थिए ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकायुवतीको मोबाइलमा ३७ पटक मिसकल, ए’सिड हान्नु अगी मोटर साइकलमा छो’डिदिएका थिए !
काठमाडौं, ९ साउन । ‘कहाँसम्म जाने बहिनी, म मोटरसाइकलमा पुर्‍याई दिन्छु नि’ बिहीबार राति पौने ८ बजे रौतहट लक्ष्मीपुर घर भई डल्लुमा बस्दै आएका मो’हम्मद आ’लमले दही र चिउरा किन्न निस्किएकी चिनेजानेकै एक युवतीलाई आग्रह गरे । ओखलढुंगाकी ती युवती र आलमबीच पुरानै चि’नजान थियो ।‘भैगो दाइ, म हिंडेरै जान्छु,’ युवतीले भनिन् । तर आलमले जि’द्धि गरे । ‘किन हिंड्नु हुन्छ, म पुर्‍याई दिहाल्छु नि, बस्नुस न,’ आलमले यति भनेपछि युवती मोटरसाइकलको पछाडि बसिन् ।
केही मिनेटमै आलमले युवतीलाई बाफल चोकमा छोडिदिए ।आलमको डल्लुमा कवाडी पसल छ । एक जना भारत शिवरका युवक मुन्ना मोहम्मद आलमकै पसलकै कामदार । युवतीलाई बाफलमा छोडेर आलम मोहम्मदलाई लिन डल्लु फर्किए । मोटरसाइकलमा हालेर मोहम्मदलाई बाफलमा छोडिदिए ।केही समयपछि आलम मानिसको आउजाउ छल्दै बाटोबाट छेउ लागेर बसे । केहीबेरमा किनमेल सकेर युवती बाफलबाट डल्लुतिर लागिन् । त्यही क्रममा आलमका कामदारले युवतीमाथि ए’सिड छ’र्किएर भा’गे । ए’सिड ती युवतीको गाला र निधारमा लाग्यो ।
आगोले पो’ले जसरी पी’डा हुन थालेपछि युवती चि’च्याउँदै छ’टपटिन थालिन् ।युवतीमाथि ए’सिड छ’र्किएको पत्तो पाएपछि स्थानीयले तत्कालै नजिकै रहेको मनमोहन अस्पताल पुर्‍याए । तर त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि उनलाई कीर्तिपुरस्थित ब’र्न अस्पताल लगियो ।घ’टनाबारे प्रहरीले जानकारी पाइसकेको थियो ।घा’इते युवतीलाई अस्पताल पुर्‍याउँदा पौने ९ बजिसकेको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र महानगरीय प्रहरी कार्यालयका डीआइजी विश्वराज पोखरेलले ‘आ’रोपितलाई जसरी पनि छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गर्नू’ भन्ने आ’देश महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी दीपक थापा र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी श्याम ज्ञवालीलाई दिए ।
त्यहीबीच प्रहरीले बाफल चोकमा जडान गरिएको सी’सीटीभी फुटेज नि’काल्यो । अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएकी युवतीसँग सामान्य सो’धपुछमा महाशाखा र परिसरको टो’ली लाग्यो । यता सी’सीटिभी फुटेजमा शं’कास्पद व्यक्तिको हु’लिया पत्ता लाग्यो ।घ’टना हुनुभन्दा केही घण्टा अघिबाट युवतीको मोबाइलमा ३७ पटक मिसकल आएको रहेछ । त्यसमध्ये आधाजसो मिसकल आ’लमको मोबाइलबाट गरेको पत्ता लाग्यो । घ’टनाका आ’रोपी पत्ता लगाउन प्रहरी नजिक पुगिसक्यो । त्यहीअनुसार पी’डित यु’वतीसँग सोधपुछ गर्दा आ’लम आफ्नो दाइसमानको मान्छे भएको बताइन् ।
तर प्रहरी युवतीको ब’यानमा मात्रै सीमित थिएन । घ’टना लगत्तै वरिपरिका सबै गौं’डा र सडक ब’न्द गरेर अनुसन्धान सुरु भइसकेको र साँझ परेकाले आ’रोपित भा’ग्नसक्ने अवस्था थिएन । त्यहीबीच युुवतीको उपचार भइरहेकै बेला राति ११ बजे महाशाखा र परिसरको संयुक्त टो’लीले ए’सिड प्र’हार गर्नेमध्येका एक जना भारतीय ना’गरिक मु’न्ना म’हमदलाई नियन्त्रणमा लियो ।उनी देब्रे हातमा ए’सिड छ’र्किने क्रममा छ’चल्किएर ना’डी र पाखुरामा पो’लेको अवस्थामा भेटिए । उनलाई नियन्त्रणमा लिएलगत्तै आ’लमलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो ।
पक्राउपछि ए’सिड प्र’हार गर्ने म’हमदले ‘मैले त मा’लिकको आ’देश मा’नेर ए’सिड हा’न्न गएको हुँ, मलाई नै ए’सिड लाग्यो, सा’रै पो’लेको छ’ भन्दै प्रहरीलाई ब’यान दिए ।म’हमद र ए’सिडपीडित युवतको चि’नजान छैन । आ’लमले आफूले ती युवतीलाई मन पराएको तर उनले वा’स्तै नगरेपछि ए’सिड हा’न्ने यो’जना बुनेको ब’यान दिएका छन् । ‘उनले रुपको सारै घ’मण्ड गरिन्, मैले मन पराउँथे तर कुनै म’तलब नै ग’र्दिन थिइन्,’ आलमले प्रहरीसँग ब’यानमा भनेका छन्, ‘रुपको घ’मण्ड गर्न थालेपछि मलाई अ’सह्य भएर ए’सिड हा’न्ने योजना बनाएँ ।’
तर पी’डित युवतीले आलमलाई दाजु समान मान्ने गरेकोले कुनै माया प्रेम नभएको बताएकी छिन् । उनले आ’लमसँग त्यस्तो झै’झगडा पनि कहिल्यै नभएको बताएकी छिन् । ती युवती राजधानीको एउटा तारे होटलमा अ’काउन्टेन्टका रुपमा कार्यरत रहेको पनि खुलेको छ ।‘जुजुधौ दही र चिउरा लिएर कोठातर्फ जाँदै थिए, एउटा खैरो सर्ट र मुखमा मा’स्क लगाएको मानिस कु’देर म भएको ठाउँमा आयो, हातमा भएको बस्तु मेरो अनुहारमा फ्ँ’याकेर भाग्यो,’ ती युवतीले प्रहरीलाई भनेकी छन्, ‘मेरो कसैसँग झ’गडा पनि परेको थिएन, तर त्यो मानिस म पसलमा जाँदा परबाट नि’यालिरहेको थियो ।’
एसएसपी थापाका ए’सिड हा’न्नेमाथि अनुसन्धान गरी मु’द्दा च’लाउन महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूको जि’म्मा लगाइएको बताए । ए’सिड प्र’हारपछि प्रहरीले निकै द’बाबमा काम गरेर नै अ’भियुक्तलाई का’नुनी दा’यरामा ल्याउन सकिएको उनले बताए । ‘हामी घ’टनापछि निकै द’बाबमा थियौं,’ थापाले भने, ‘तर परिसर र महाशाखाको संयुक्त प्रयासमा घ’टना घ’टेको ३ घण्टाभित्रै अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न स’म्भव भयो ।कान्तिपुर दैनिकबाट